DEG-DEG: Arrimaha Kylian Mbappe Ee Real Madrid Oo Xog Cusubi Kasoo Korodhay & PSG Oo Aan Waxba La Hadhin - Laacib
HomePSGDEG-DEG: Arrimaha Kylian Mbappe Ee Real Madrid Oo Xog Cusubi Kasoo Korodhay & PSG Oo Aan Waxba La Hadhin
DEG-DEG: Arrimaha Kylian Mbappe Ee Real Madrid Oo Xog Cusubi Kasoo Korodhay & PSG Oo Aan Waxba La Hadhin
May 20, 2022 Apdihakem Omer Adam
Waxa wali xaalad ijiid aan ku jiidee ah ku jira mustaqbalka weeraryahanka Paris Saint-Germain ee Kylian Mbappe oo qandaraaska uu ku joogo gegida Parc des Princes yahay mid ku eeg dhammaadka bisha June ee sanadkan.
Kylian ayaa mudo dheer lala xidhiidhinayaa kooxdiisa riyada ee Real Madrid oo haatan ugu dhaw isla markaana uu qaab bilaash ah kaga degi karo.
Los Blancos ayaa xagaagii hore lacag 170 Milyan oo euro ah u gaadhay PSG balse kooxda laga maamulo dalka Qatar ayaa diiday heshiiskaas oo u muuqday mid aan la iska indho-tiri karin.
Mustaqbalka Mbappe ee Paris ayaan ahayn mid wali meel ku cad, Mbappe ayaa dhawaan sheegay inuu gudaha bishan May si rasmi ah u xaqiijin doono halka uu xilli ciyaareedka dambe ka ciyaarayo.
War shalay soo baxay ayaa sheegayay in PSG ay u gaadhay Mbappe heer waali ah iyaga oo u ballanqaaday inuu noqon doono Mulkiilaha mashruuca kooxda iyadoo xataa la siin doono go’aanka uu tababarayaasha ku caydhin karo isla markaana kaga qayb qaadan karo xiddigaha kooxda la keenayo.
Sida uu haatan sheegayo saxafiga Talyaaniga ah ee Fabrizio Romano, Real Madrid ayaa Salaasadii toddobaadkan jawaab rasmi ah ka sugaysay Mbappe balse 23 sano jirkaas ayaa markale kooxda ree Spain weydiistay inay wakhti dheeri ah siiyaan.
Inuu Mbappe markale dib u dhigis sameeyo ayaa lagu sifayn karaa dalabaadka PSG oo horumar weyn ku samaysay 15-kii maalmood ee ugu dambeeyay wixii ay markii hore usoo bandhigaysay.
Ugu dambayn, saxafi Romano ayaa intaas ku daraya in shaqsiyaadka ku dhaw-dhaw Mbappe sida qoyskiisa iyo wakiiladiisu ay maanta wadahadalo kale oo iyaga dhexdooda ah yeelan doonaan.